Wam Amava kunye Dating kwi-China njengoko Langaphandle isixhosa Utitshala JIMMYESL
Wonke umntu kufuneka umntu – ngoko ke uyaya i-ingoma yi-luhlaza okwesibhaka-bhaka Abakhuluwa. Kubaluleke kakhulu yinyaniso ukuba wonke umntu iimfuno a companion ngoko ke ukuba ufuna izakuba abahlala nokufundisa kwi-China kuba inani leminyaka, kubalulekile kusenokwenzeka ukuba uza amava dating kwi-China e-ezinye sesishumi. Kweli nqaku, ndiya kuba ekude ezinye wam personal sijongane namava ka-dating kwaye romance kwi-China kunye nokunika ezinye iingcebiso kwi njani ukuba ibandakanye ezahlukeneyo imiba ukuze nibe encounter. Isixhosa ikhangeleka kuba kakhulu”ubufazi”phantsi kwi-China ngoko ke ukuba ufuna umntu ukufundisa isingesi enkulu abafundi ngexesha ngezifundo kwi-China, uzakufumana ngokwakho surrounded yi-young ibhinqa abafundi, abanye babo baya, kunjalo, kuba kakhulu pretty. Mna ubuqu nazi ezinye langaphandle ootitshala abaya uzamile kumhla zabo abafundi kodwa nangona oku sorely tempting, MUSA phantsi na iimeko umhla a lwabafundi.
Kulungile, kukho inani izizathu. Kuqala, utitshala ufumana igcine in a position of trust kwaye akufunekanga betray ukuba trust. E-UK, romanticcomment budlelwane nabanye phakathi utitshala kwaye student ingaba mthethweni kwaye eziliqela ootitshala zithe jailed kuba kufumaneka kwi-ngesondo ubudlelwane kunye zabo abafundi.
Okwesibini, iilwimi ziya wag
Yakho abafundi basebenza nabo baya guquguqula malunga kwenu. Ootitshala kwi-China ingaba ngokuqhelekileyo highly respected ngokuthi abafundi kodwa akukho ngcono indlela ukutshabalalisa oku ngokubhekiselele kunokuba uzame ukuba seduce a lwabafundi. Ekugqibeleni, izikolo kwi-China musa approve ka-romanticcomment budlelwane nabanye phakathi student kwaye utitshala. Ukuba ufaka ndawufumana, yakho isivumelwano siza kube kugqityiwe, uza kuphulukana nayo yakho umsebenzi kwaye unakho ukufumana umyalelo ubhekiso nto leyo iza kwenza kube kakhulu harder kuba ufuna ukufumana umsebenzi omtsha. Apho ke, ungakwazi ukufumana a girlfriend okanye boyfriend kwi-China. Iinkwenkwezi kwaye nightclubs kukho uninzi obvious iindawo jonga kodwa ingxaki kukuba abantu lowo kufuneka ahlangane akuyi mhlawumbi hayi nako ukuthetha isingesi. Dating a colleague (mhlawumbi a mfo langaphandle utitshala okanye kuyo Isitshayina enye) i-khetho kodwa xa mna balingwe ukuba umhla wam Isitshayina counterpart utitshala kwiminyaka embalwa edlulileyo, mna ke intliziyo phantsi ngenxa wayengomnye ikhangela kuyo umntu kwaye foreigner. Le yenye ingxaki ukuba uza kufuneka lumkela – ezinye Isitshayina girls iya kuba reluctant ukufumana kwi-ubudlelwane kunye foreigner ngenxa yokuba siyazi ukuba ngexesha abanye incopho, uza kushiya kweli lizwe kwaye yena uya kuba lokugqiba nokuba landela wena okanye ukwaphula phezulu kunye nawe. tyhiliza Ngoko ke ndajika kwi-internet. Kukho inani dating websites kwi-China ezifana ne-China Uthando, Asian Dating, Isitshayina kisses kwaye ukuqhagamshela icacile phakathi kwabanye kwaye kwaba kwi enye yezi websites ukuba ndandidibana wam ex-girlfriend. Nangona kunjalo, ingaba khumbula ukuba China yi vastly enkulu kweli lizwe kwaye ukuba wenza kuhlangana a kubekho inkqubela ungathanda ukusuka enye yezi zephondo, uza kakhulu kusenokwenzeka ukuba kufuneka utyelele i-considerable umgama ukuya kuhlangana phezulu kunye naye. Njengoko kunjalo nge usebenzisa naliphi na dating iwebhusayithi, China kufuneka kanjalo kubekho wary na kubekho inkqubela abo iqala professing yakhe uthando kuwe phambi kokuba wenze nkqu zahlangana yakhe kwi-umntu kwaye ke ngesiquphe ifumanise herself kwi-trouble kwaye iqala ecela kuwe kuba imali. Nayo kakuhle-kwazeke ukuba abaninzi girls kwi-China ufuna enye i-British okanye i-american umntu ngokulula ukufumana i-visa ngoko ke, phambi kokuba ufumane kakhulu kulinywa nzulu obandakanyekayo kunye kubekho inkqubela kwi-China, yenza ukuqinisekisa ukuba yena uthanda wena kuba ngokwakho kwaye hayi kuba imali yakho okanye yakho nako ukufumana kwayo i-visa. Isitshayina abafazi ingaba ngokubanzi kakhulu materialistic. Ngokungafaniyo imeko kwi-West apho falling ngothando ufumana iziphumo i-yeemvakalelo zakho unxulumano oko kwenzeka enyanisweni phakathi abantu ababini, China, abafazi bakholisa ukuba thatha kokukhona analytical indlela ingxowa-a iqabane lakho. Yakho umsebenzi, isimo kwaye ubutyebi ngokunjalo parental ukuvunywa ingaba yonke imibandela apho Isitshayina kubekho inkqubela uza cinga phambi igqiba na okanye hayi embark kwi ubudlelwane kunye nawe. A Isitshayina umfazi ngu closest ukuba umama ngoko ke njani koko ufumane ihamba kunye yakho girlfriend ke umama uza kanjalo beka impumelelo okanye ukungaphumeleli yakho budlelwane. Ukuba yakho girlfriend likes kuwe kakhulu kwaye ezinzima malunga nani, yena uya kuba kakhulu keen ukufumana wena wangena umama ke iincwadi ezilungileyo. Ngoko ke, hayi kuphela kuya kufuneka sithenge izipho kuba yakho girlfriend, uza kamsinya kuba kulindeleke ukuthenga izipho kuba yakhe abazali ngokunjalo. Isitshayina abafazi unako kanjalo kuba kakhulu inflexible kwaye stubborn. Ungummi wangaphandle kulo ilizwe labo, ngoko ke, babeya silindele ukuba lahla zonke yakho masiko abaxhasayo ka-kokwabo. Ukuba uzama ukwenza iziphakamiso: yakho Isitshayina girlfriend ukuze ube kunye yiya emzini wakho kweli lizwe kunye ukuya kuhlangana abazali bakho, ube wamxelela ukuba oku akunakwenzeka ngenxa ngokunxulumene Isitshayina yesiko, i-unmarried umfazi andinako ukuhamba ngaphandle kwayo ekhaya kwiphondo kunye boyfriend yakhe kude kube semva umtshato. Kumzekelo wam wokuqala inqaku malunga teaching in China, mna kukhankanywe ingcamango”ubuso”Isitshayina inkcubeko. Isitshayina abantu ingaba ucinga nto ndizixelela a ukuxoka ukugcina kwezabo ubuso kwaye oku ngelishwa kanjalo usebenza entsimini ka-budlelwane nabanye. Wam ex-girlfriend umzekelo, wandixelela ukuba yena waba ngutata kwaye ukuba wayeyindoda retired ifektri lwabasebenzi basefama. Akubanga de wam owakhe ubawo bafika kwi-China ukuxoxa umtshato mimiselo ukuze ndibe ndawufumana ukuba lukayise kokuba ngqo wafa ngaphambi ndaba nkqu zahlangana yakhe. Xa ndicela yakhe kutheni yena waba lied, waze wathi ukuba yena akazange ngathi uthetha malunga elidlulileyo kwaye ukuba yena liked ukuba pretend ukuba uyise wakhe waba? ziphile kwaye kunye kwayo ngomoya. Ngeli xesha sasivuya umba, mna kanjalo bamfumana ukuba wayengomnye? esebenzayo ilungu eziliqela dating zephondo nangona mna andazi ukuba yena ngqo ebhalwe nabani na ongomnye ngeli xesha yena waba nam. A Isitshayina umfazi ilindele a ubomi luxury ukusuka umyeni kananjalo alinakukhuselwa ethanda tshata kuba ngcono okanye worse. Mna ke iselwa shocked e njani ruthless wam ex-girlfriend waba kulo mba. Msinyane i-ekuthetheni waba kwi amakhadi, yena resigned ukusuka wakhe umsebenzi kwi kwesizathu ukuba inkampani yakhe kokuba kugqitywe ukuba relocate kwenye inxalenye efanayo isixeko nokunyamezela ende ibhasi uhambo waba kakhulu kakhulu kuba yakhe. Kwaba iselwa obvious ukuba wacinga ukuba xa yena efumana watshata, yena uya ayisasebenzi kuba ukusebenza. Ukuba bakhulise ukhubazeko okanye imeko yezempilo, yakho Isitshayina girlfriend unokugqiba ukushiya kuwe. Wam ex-girlfriend ngasekhohlo kwam ngenxa yokuba yena ayikwazanga yamkela a enokwenzeka umyeni owathi hypertension, nkqu nangona imeko ngu treatable. Kwi-China, kukho misconception ukuba zonke foreigners ingaba otyebileyo. Akuvumelekanga uncommon kuba young Isitshayina abafazi ukubeka ngendlela enkulu yaba ka-iinzame ukufunda isingesi esikolweni ngoko ke ukuba banako bag langaphandle boyfriend. A Isitshayina kubekho inkqubela yayo mid-Twenties neminyaka eli-ingaba kanjalo kuqwalasela, hayi koko kuba boyfriend kodwa kanjalo kuba enokwenzeka elizayo umyeni. Eneneni, izakuba kakhulu engathndwayo ukuba enjalo umfazi uya kuba ethanda kuphuma kumhla kunye umntu ngaphandle kokuba yena sele kakhulu olomeleleyo uvakalelo kuba kuye njengoko a enokwenzeka lowo utshate naye. Kunokwenzeka iselwa scary kuba foreigner ukuba kubekwa phantsi kwesi uhlobo koxinzelelo ku-i ekuqaleni kwethuba kwi ubudlelane ke ibe walumkisa ukuba le into ukuze nibe kufuneka ibandakanye. Ngoko ke, ngaba phawula zonke yakhe iibhokisi kwaye wena kunye embark kwi budlelwane. Ukuba bonke uyaya kulungile, kuya kuphela kuba mba ixesha phambi mcimbi womtshato kukho. Enye a Isitshayina umfazi, kuya kuba yimfuneko kuba ukuba eyakho i-ipropati kwi-China kwaye anike dowry. Wam ex-girlfriend babefuna i-apartment costing RMB, (malunga ne £) kwaye i-RMB, (malunga ne £) dowry. Hayi kuphela, kodwa yena kanjalo wamkhuthaza ukuba aye i-apartment kufuneka bought outright, ngaphandle uthatha imali-mboleko okanye mortgage. Kwi-kubuyela kuba dowry, umfazi ke icala kukuba ngokuqhelekileyo kulindeleke ukuthenga imoto okanye furnish i-apartment kodwa ukuba yakho girlfriend akakwazi ukuza ukusuka otyebileyo usapho, yena ndiya kukuxelela ukuba yena ngu exempt ukusuka zilandelayo omnye wakhe kunye masiko ngenxa yokuba isiko kuphela kuba”otyebileyo iintsapho”. A kubekho inkqubela esuka ngaphantsi kakuhle-ngaphandle usapho ingaba ucinga nto demanding ukuba umntu ke icala ahlawule kuba yonke into ngexesha yakhe usapho akunjalo kuba negalelo enye penny ngakulo iindleko sicwangciso phezulu marital ekhaya. Isitshayina abafazi kanjalo silindele ezininzi expensive izipho. Ngojanuwari nangofebruwari ingaba kodwa expensive iinyanga kuba ekubeni a budlelwane kwi-China kuba zombini i-valentine ngu Mhla kwaye Isitshayina Entlakohlaza Festival kuwa jikelele kweli xesha. Ninika i-unye ye-uhlobo izipho nibe kucelwa ukuba anike, ezinye izinto ukuze wam ex-girlfriend ethe wacela ziquka i-iPhone, Chanel perfume kwaye igolide jeweler. Ukongeza, yena uya kanjalo kuba ilindele eziqhelekileyo red packet (imali isipho) Isitshayina Entlakohlaza Festival. Yena ingaba nkqu imboniselo ezi extravagant lunika njengoko ezincinane izipho, wakhe beqiqa ke, Kulungile, ukuba ngaba awukwazi kuthenga kum i-iPhone, njani emhlabeni ingaba oza kukwazi ukuthenga i-apartment. Xa mna balingwe ukuba argue ukuba ezi babebaninzi kakhulu expensive, impendulo endiyifumeneyo, Ukuba andiyenzanga uthando kuwe, mna uphumelele ukuba ufuna benu izipho. Abanye kwiminyaka eyadlulayo, omnye umntu waba chasing kum, waba otyebileyo, kokuba i-apartment kwaye imoto, kodwa andiyenzanga uthando kuye, ngoko ke, mna ungafuni nantoni na evela kuye. Yena wenza oko isandi njengoko ukuba lavishing wam imali ngomhla wakhe waba ilungelo elilodwa okokuba mna, kufuneka ngako oko kuba. Kunokwenzeka iselwa a shock kuba foreigner ukuba abe faced kunye enjalo iimfuno, ingakumbi xa zisetyenziswa ukuze ukuthenga nto ngaphezu chocolates okanye iintyatyambo ngenxa yabo girlfriends emva ekhaya. Kwi-China, umntu kanjalo kulindeleke ukuba ahlawule kuba yonke into kwi – a ubudlelane ke iphezulu ye-izipho, uzakufumana ngokwakho ukubhatala ye-nsnp ngaphandle, ezibanzi zezothutho kwaye mhlawumbi indawo yokuhlala ngokunjalo xa kumhla nge Isitshayina umfazi. Ukuba kukho into enye ukuba ndine learnt ukusuka ekubeni a Isitshayina girlfriend, kubalulekile ukuba dating a Isitshayina umfazi yi ngenye expensive ukuzibophelela. Ibe walumkisa ukuba Isitshayina inkcubeko, intlanganiso umfazi ke, abazali ngu tantamount ukuba committing ukutshata. Ukuba akuqinisekanga ukuba ngaba ubuya kuba ethanda tshata yakho Isitshayina girlfriend, MUSA ukwamkela isimemo ukuhlangabezana yakhe abazali. Ngo ngoku ndiqinisekile abaninzi kuni ngabo bemangalisiwe ukuba kunzima kukunceda kakhulu i-bother ka-dating kwi-China nge kubekho inkqubela kwi-China. Kwi-nangona kukho le yonke into ukuba kufuneka ukufunda ngoko ke, ukuza kuthi ga ngoku, kukho abathile okuninzi ka ekubeni kuyo Isitshayina girlfriend kwi-China. Umzekelo, ootitshala abavela kumazwe angaphandle iyakwazi ukuva kakhulu lonely kwaye isolated kwi-China. Emva zonke, baya kuba ekhohlo zabo zonke abahlobo nosapho emva ekhaya kwenzeka China kwaye ukususela hayi ezininzi Isitshayina abantu bathethe isingesi, ingathatha kuba nzima ukwenza abahlobo apha. A Isitshayina girlfriend unako ukugcina boredom kwaye loneliness e bay kwaye kukunika ezininzi ndonwabe phinda-phinda. Yena unako kuba umntu ukuba bathethe xa ufuna bonke yedwa yakho apartment emva ngosuku emsebenzini, yena unako ukufundisa kuwe Isitshayina kwaye kukunceda ukuba koyisa ulwimi imiqobo ngokunjalo nezinye isebenziseke iingxaki ukuze nibe ubuso kwi-China. Ukususela yena uyayazi indlela kwi-China, yena unako kanjalo sikunika exabisekileyo iingcebiso xa unengxaki kwaye inkuthazo xa ufaka worried okanye nervous. Ngenxa yabo imicimbi yayo nenkcubeko, girls kwi-China nokunika i-impression yokuba ngenye prudish kodwa kufuneka ngaba waphumelela ngowe-ngokuncothula omnye, uza fumana nokuba yiyo ngokwenene iselwa capable ka-zinika yakhe western counterparts a sebenzisa ngenxa yabo imali kwi-intimacy kwicandelo. Mna ke iselwa shocked ngqo kwi njani phezulu wam ex-girlfriend ke ngesondo drive waba, ingakumbi ngenxa yokuba ngesondo ngaphambi kokutshata kakhulu kakhulu frowned phezu kwi-esiqhelekileyo Isitshayina inkcubeko. Ngoko ke, njengoko unga khangela, dating kwi-China ngu kabini-edged ikrele. A Isitshayina umfazi kusenokuba kakhulu supportive kwaye fun ukuba ube kunye, kodwa yena unako kanjalo kuba expensive kwaye inflexible. Phambi kwenu nokulinga kwi enokwenzeka minefield a ubudlelwane kunye Isitshayina umfazi, kufuneka ngenyameko cinga ingcebiso kweli nqaku
← China Incoko Amagumbi FREE China Incoko Ngaphandle Yobhaliso